iMore ချစ်စရာရုပ်ပြောင် Keyboard ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » iMore ချစ်စရာရုပ်ပြောင် Keyboard ကို-Cool စာလုံး GIFs Keyboard ကို
iMore ချစ်စရာရုပ်ပြောင် Keyboard ကို-Cool စာလုံး GIFs Keyboard ကို APK ကို
iMore Keyboard ကို - နောက်ဆုံးရုပ်ပြောင်သုံးစွဲဖို့အခမဲ့, အီမိုတီကွန်ကိုသင်ရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများနှင့်အတူ 160000 + အီမိုဂျီရုပ်ပြောင်, စတစ်ကာ, ဖြောင့်ရုပ်ပြောင်ကီးဘုတ်ကနေ Allo, Facebook, Twitter, Instagram ကို, WhatsApp ကို, ကြေးနန်းနှင့်မည်သည့်လူမှုရေး apps များကဲ့သို့အနေရာတိုင်းရုပ်ပြောင်စတစ်ကာများကျော်အစာရှောင်ခြင်း input ကိုကူညီပေးသည် ကာတွန်း GIF များ & အေးမြဖောင့်။
iMore GIF ကိုကီးဘုတ် app ကိုသင်အလွယ်တကူရှာတွေ့နှင့်သင့်အကြိုက်ဆုံး apps များအတွက် GIF များဝေမျှနိုင်တယ် Android အတွက် third-party ကီးဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။
???? iMore GIFs Keyboard ကိုလုပ်ပေးနိုင်သည် ????
- GIF များနှင့်အတူ iMore Keyboard ကိုအတူ GIF ကို Keyboard ကိုပိုမိုဆိုရမည်။
- သင်တိုင်းစကားပြောဆိုမှုအတွက်ဆိုလိုအတိအကျဘာကိုသိရှိစေရန်စုံလင် Animated GIF များနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုရှာပါ။
- ရှာဖွေရန်နှင့် browse နောက်ဆုံးရေပန်းစား GIF များနှင့်လွယ်ကူစွာ WhatsApp ကိုပေါ်တွင်သင်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသူတို့ကိုမျှဝေပါ။
- နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်နောက်ဆုံးပေါ် hashtags ကိုအတူ GIF များရှာပါ! ရှာဖွေရန်, သင့်အကြိုက်ဆုံး Keyboard ကို GIF များရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မျှဝေပါ။
- အကောင်းဆုံး GIF များ iMore Keyboard ကို GIF များအပေါ်ဖြစ်ကြသည်။
- Gif ကီးဘုတ်ဒါလူကြိုက်များ - သူတို့ပုံရိပ်တွေရွေ့လျား၏အင်တာနက်ကိုဖွင့်စာကြည့်တိုက်မှလျင်မြန်စွာလက်လှမ်းခွင့်ပြုပါနှငျ့သငျက်ဘ်ဆိုက်ထဲတွင်ရှာတွေ့မှဝေးသွားကြဖို့မလိုပါ။
ညာဘက်သင့်ရဲ့ကီးဘုတ်ကနေ - iMore Keyboard ကို, ရှာ browse နှင့်သင်၏စာသားမက်ဆေ့ခ်ျအတွက် GIF များဝေမျှဖို့အလွယ်ကူဆုံး & အမြန်ဆုံးနှင့်အလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အများကြီးကွဲပြားခြားနားသောအေးမြသင်္ကေတများနှင့်အေးမြဖောင်စတိုင်များနှင့်အတူစတိုင်ဖောင့်ကိုစာသားမှပုံမှန်စာသားကိုပြောင်းလဲအထောက်အကူပြုတစ်ဦးကဖန်စီ Cool စာလုံး Keyboard ကို။
- သင်ပညာရှင်များသည်, အေးမြဖောစီးပွားဖြစ်-အသုံးပြုရန် 100% အခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။
- ထိုသို့သောစက်ရုပ်ဖောင်တူသောမည်သည့် App ကိုဖောင်၏အစားထိုးအဖြစ်ကီးဘုတ်အက္ခရာပေါ်အေးမြဖောင့်, ပြောင်းလဲပါ။
- Free အခုအချိန်မှာသင့်ရဲ့ iMore Keyboard ကိုများအတွက်အေးမြဖောကိုယ်ပိုင်!
- အခမဲ့အဘို့သင့် font ကို Keyboard ကိုစိတ်ကြိုက်စာလုံးတွေဇင်!
- စသည်တို့ကိုအလယ်တန်းလက်ညှိုးကိုအီမိုဂျီတာ, ကြံ့အီမိုဂျီတူသောအဆိုပါနောက်ဆုံးပေါ်ချစ်စရာရုပ်ပြောင်ကို Android 8.0 + & Android အတွက် O. ၌တွေ့
- ( 'ω ^ \_) အီမိုဂျီစာသားမျက်နှာ - ချစ်စရာအပြုံးပုံ, kaomoji နှင့်အခြား kawaii ပစ္စည်းပစ္စယရှာဖွေ iMore အတွက် Kaomoji ချစ်စရာရုပ်ပြောင် Keyboard ကို!
- ထို Keyboard ကိုသုံးပါရည်းစားအဆက်အသွယ်, ဂျက်, ခင်ပွန်းများအတွက်ချစ်စရာရုပ်ပြောင်ထားတော်မူ၏။
- အီမိုတီကွန် + စတစ်ကာများ + Lenny မျက်နှာ + အီမိုဂျီစတစ်ကာများ + အပြုံးပုံ + စာသားမျက်နှာ
- ပိုအီမိုဂျီ Styles: က Galaxy စီးရီး, etc Facebook ကိုအီမိုဂျီအန်းဒရွိုက် 8 အီမိုဂျီ၏ Messenger ကို
???? ရုပ်ပြောင်ဘီဘာအို: ????
မူပိုင် All rights reserved Facebook ကပိုင်ဆိုင်
မူပိုင် All rights reserved တွစ်တာ, Inc ကပိုင်ဆိုင်
မူပိုင် All rights reserved WhatsApp ကို Inc ကပိုင်ဆိုင်
မူပိုင် All rights reserved Instagram ကိုကပိုင်ဆိုင်
???? မီးမောင်းထိုးပြထားသည် ????:
- Clipboard - ဆို content တွေကိုကော်ပီကူးခြင်းနှင့် paste
- အရွယ်အစားပြောင်းပါနှင့်အုပ်စုခွဲကီးဘုတ် layout ကို
- လက်ဟန်စာရိုက်နှင့်အတူမြန်မတ် input ကို
- ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများကျော် 80 + အဘိဓါနျ
- mistyping အသိအမှတ်ပြုရန်ဆုံးမခြင်းအကြံပြုချက်များပေးနှင့်သင့်စာရိုက်လွယ်ကူအောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့စမတ်။
- Fancy Keyboard ကို Themes
- ???? 1000 + အေးမြသောကီးဘုတ် themes များ, တိုးမြှင့်ဖို့ဆက်လက်။
- အသံဖြင့် input ကိုအတူသင်တို့အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ပိုငျသညျကိုအသုံးပြုရန်, ပိုကောင်းသင်လိုချင်တာတွေကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သင်ကတိကျမှန်ကန်စကားလုံးအကြံပြုချက်များကိုပေးသည်။
???? သီးသန့်လုံခြုံရေးနှင့်လုံခြုံရေး ????
- ကျနော်တို့ဟာ keyboard ကနေမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်စုဆောင်းဘယ်တော့မှ။
ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်ပိုကောင်းနှင့်ပိုပြီးအသုံးဝင်သင့်ရဲ့စာရိုက်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်များအတွက် "iMore ရုပ်ပြောင် Keyboard ကို" app ကိုအောင်အပေါ်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ မည်သည့်မေးမြန်းချက် / အကြံပြုချက်များ / ပြဿနာများအတွက်သို့မဟုတ်သင်ရုံဟဲလိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့အခမဲ့ခံစားရပါ။
iMore Keyboard ကို - ပို Cooler Cool Touch ကိုကြည့်ပါ။
iMore ချစ်စရာရုပ်ပြောင် Keyboard ကို-Cool စာလုံး GIFs Keyboard ကို
18.73 ကို MB
Cool Fonts Keyboard ကို Dev မှ iMore ။
FUN Keyboard ကို - ...
Fancy Keyboard ကို ...